‘भारत’को सुटिङमा व्यस्त रहेका सलमानले किन गरे यस्तो फोटो सेयर? « Janata Times
‘भारत’को सुटिङमा व्यस्त रहेका सलमानले किन गरे यस्तो फोटो सेयर?
काठमाडौँ बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको अर्धनग्न तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
आफ्नो आउँदो फिल्म ‘भारत’को सुटिङका लागि माल्टामा रहेका सलमानले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा शरुीरको तल्लो भाग समुन्द्रको पानीमा डुवाएको र माथिल्लो भाग नांगो अवस्थामा रहेको फोटो सार्वजनिक गरे।
यो फोटो सलमानको पछिल्लो भागबाट लिइएको छ। सलमानका फ्यानहरु उनको अर्धनग्न दृश्य हेर्न मरिहत्य गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैकारण सलमानले यो तस्वीर खिचाएको अनुमान गरिएको छ।तस्वीरको क्याप्सनमा उनले ‘पानी’मात्रै लेखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने सलमान यतिबेला आफ्ना ज्वाई आयुष शर्माको फिल्म ‘लवरात्रि’को प्रमोशन र भारतको सुटिङमा एकसाथ जुटेका छन्। फिल्म सुटिङका क्रममा सलमानले धेरै फोटा खिचेको र केही फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रीय बनेका छन्। भारतमा सलमान र कैटरिना मुख्य भूमिकामा देखा पर्दैछन्।
सलमान हालै अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले प्रकाशन गरेको विश्वको ज्यादै कमाई गर्ने कलाकारको सूचीमा टप टेनभित्र परेका छन्। लोरको सूची प्रकाशननमा टप टेनमा पर्न सफल भएका छन्। उनी २६७ करोड कमाउँदै उक्त सूचीमा नवौँ स्थानमा परेका हुन्।
उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुको जिल्लामै कांग्रेस पत्तासाफ
दार्चुला, जेठ ३ । दार्चुलाको नौ स्थानीय तहमै कांग्रेस पत्तासाफ भएको छ। दार्चुलाको नौ वटै स्थानीय तहमा
दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्षमा पूर्वपत्रकार धामी निर्वाचित
दार्चुला, जेठ २ । दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका हिरासिंह धामी निर्वाचित हुनुभएको छ
बाजुराको गौमुलमा एमालेको क्लिनस्वीप, अध्यक्ष-उपाध्यक्षसहित सवै वडामा विजयी
गगन अयडी/बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको नेतृत्व स्थापित भएको छ । बैशाख
धनगढी उपमहानगरको मतगणना बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने
धनगढी,३१ बैशाख। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढी उपमहानगरको मतगणना बिहान ११ बजेबाट सुरु
कैलालीबाट बाजुरा जाँदै गरेको बस डोटीमा दुर्घटना,३० जना घाइते
धनगढी, २९वैशाख। कैलालीको अत्तरियाबाट बाजुरा जाँदै गरेको बस डोटीमा दुर्घटना भएको छ। बिहीबार डोटीको पूर्वीचौकी
धनगढी, २८ वैशाख । धनगढीका मतदान अधिकृत दिजराज भट्ट मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका छन् ।